Digital Postcards and Certifications[ပြင်ဆင်ရန်]
This message was sent by Wikipedia Asian Month International Team via MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၈:၅၈၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Dhawell.hlugalay (ဆွေးနွေး) ၁၆:၄၇၊ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ငုံးခြေဝါ . Please check here  Zawthet (ဆွေးနွေး) ၁၈:၀၁၊ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks. No wonder, I know now how you know so much of all these strange names. Dhawell.hlugalay (ဆွေးနွေး) ၀၅:၀၈၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wikipedia Asian Month 2020[ပြင်ဆင်ရန်]
Wikipedia Asian Month 2021[ပြင်ဆင်ရန်]